तथ्याङ्कमा कोरोनाभाइरस : जोखिम उमेर समूहमा संक्रमण बढ्दै – MySansar
तथ्याङ्कमा कोरोनाभाइरस : जोखिम उमेर समूहमा संक्रमण बढ्दै
Posted on October 11, 2020 by Salokya
हिजो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो। तर आज भने त्यो संख्या घटेको छ। आज परीक्षणको संख्या घटेकोले पनि संक्रमितको संख्या घट्न पुगेको हो। हिजो १९ हजार ३२० कूल परीक्षण हुँदा ५ हजार ८ जनामा संक्रमण भेटिएको थियो अर्थात् २५.९२ % संक्रमण। आज भने १२ हजार ४२७ परीक्षण हुँदा २ हजार ५१ संक्रमित भेटिए अर्थात् १६.५० % मात्रै। हिजो शनिबार भएकोले पनि परीक्षण कम भएको हुनसक्छ। आज कुन प्रदेशमा कस्तो थियो संक्रमणको स्थिति माथि क्लिक गरी हेर्नुस्। ठूलो आकारमा नक्सा हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्।
तथ्याङ्क केलाउँदा अक्टोबर ११ तारिखको तथ्याङ्क अनुसार कूल संक्रमितको ७०.९८ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा रहेछ। यसको ठूलो संख्या काठमाडौँ जिल्लाको रहेको छ। यसले पनि देखाउँछ काठमाडौँमा संक्रमणको जोखिम कति धेरै बढेको छ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रदेशगत रुपमा यस्तो देखिन्छ-
माथिको नक्सालाई ठूलो आकारमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
काठमाडौँ उपत्यकामा उमेर समूह अनुसार संक्रमणको स्थिति हेर्नुस्-
६० वर्षमाथिको जोखिम उमेर समूहमा पनि संक्रमणको स्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ। माथिको चार्टलाई ठूलो आकारमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
जोखिम उमेर समूहमा संक्रमणको स्थिति यो चार्टमा हेर्नुस्-
अक्टोबर ११ तारिखमा कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए? हेर्नुस् तलको म्यापमा
माथिको म्याप ठूलो आकारमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
कुन उमेर समूहमा कस्तो छ संक्रमणको स्थिति?
अहिलेसम्मको संक्रमणको तथ्याङ्क हेर्दा २० देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा बढी संक्रमण भएको देखिन्छ। तर यसमा अरु केही कुरा पनि देखिएका छन्। जस्तै ८० वर्षमाथिको उमेर समूहमा प्रदेश २ मा भन्दा बढी संख्या प्रदेश १ मा संक्रमण छ। यो चार्ट ठूलो रुपमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।